Helsinki ingumuzi aseFinland ngobukhulu nenhloko-dolobha yalo. Kukhona iphile mayelana 629 512 izakhamuzi. Imizi yalo engumakhelwane kukhona Vantaa, Espoo futhi
ⓘ Helsinki ingumuzi aseFinland ngobukhulu nenhloko-dolobha yalo. Kukhona iphile mayelana 629 512 izakhamuzi. Imizi yalo engumakhelwane kukhona Vantaa, Espoo futhi ..